ICG: Awood melleteri loogama adkaan karo Al-Shabaab [Warbixin]. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Last updated May 22, 2022 404 0
“howlgalka milliteri oo keliya suuragal maahaan in lagu xalliyo jamaacadan jihaadiga ah ee jirtey inkabadan 20 sano” ayuu yiri Cumar Maxmuud oo la hadlay warbaahinta Ingiriiska, isagoo intaa ku daray in wadahadalka uu yahay wasiilada keliya ee lagu soo afjari karo dagaalka ka soconaya Soomaaliya.
“Inkastoo ciidamada Afrikaanta iyo kuwa Soomaalida ay la wareegeen magaalooyin katirsan dalka, hadana Al-Shabaab waxay maamushaa deegaanno fog fog, wayna adagtahay in deegaannadaas laga saaro oo lagala wareego” ayuu yiri Cumar Maxmuud oo la hadlayay warbaahinta Ingiriiska.
“ Ma rabo keliya inaan dhoho Al-Shabaab waa argagaxiso, balse waxay heystaan jaanib kale oo ah iney kaalin muhiim ah ku leeyihiin Siyaasadda Soomaaliya” ayuu yiri Cumar Maxmuud oo katirsan kooxda xasradaha caalamiga ah ee ICG.
“ Waxay inta badan siyaasiyiintu isku waafaqsanyihiin in Xarakada Al-Shabaab aan lagu jebin Karin wasiilada milliteriga oo keliya, sidaas darteed waa in fursad la siiyaa wadahadallada, si loo soo afjaro dagaalka ka socda Soomaaliya” ayuu leeyahay Cumar Maxmuud.
“Xalka keliya ee ii muuqda ayaa ah midkaas, waana mid u suuragelin kara dowladda cusub iney ugu dhawaato Xarakada Al-Shabaab” ayuu sii raaciyay hadalkiisa nin katirsan kooxda Xasradaha caalamiga ah, oo ah markaz hoostaga Qaramada Midoobay.